Tonga nofo ny Teny - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Tonga nofo ny teny
Tsy toy ireo evanjelistra hafa no nanomboka ny filazantsarany i Jaona. Tsy nilaza na inona na inona momba ny fomba nahaterahan’i Jesosy izy, fa hoy izy: “Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra no Teny. Izy no tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany » (Jaona 1,1-2).
Angamba ianao manontany tena hoe inona no dikan'ny hoe "ny teny", izay midika hoe "logos" amin'ny teny grika? Hoy i Jaona: “Ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny Zanaka Lahitokan’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana.” (Jaona. 1,14).
Ny teny dia olona, ​​lehilahy jiosy atao hoe Jesosy, izay niaraka tamin’Andriamanitra tamin’ny voalohany ary Andriamanitra. Tsy noforonina izy fa Andriamanitra velona mandrakizay, izay namorona ny zavaboary rehetra: “Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy nisy iray ihany, dia tsy nisy nahariana izay natao” (Jao. 1,3).
Nahoana i Jaona no manazava izany? Nahoana isika no mila mahafantatra fa i Jesosy tamin’ny voalohany dia olona izay tsy niara-niaina tamin’Andriamanitra ihany fa Andriamanitra koa? Amin’izany no ahafahantsika mahatakatra ny voka-dratsin’i Jesosy rehefa nanetry tena ho antsika izy. Rehefa tonga teto an-tany i Jesosy, dia nafoiny ny voninahiny miavaka indrindra izay nahatonga azy ho Zanak’Andriamanitra mba hitovy amintsika amin’ny maha-olombelona antsika. Fitiavana no fototry ny voninahitra.
Ilay Andriamanitra tsy manam-petra izay niditra tamin’ny fetran’ny fotoana sy ny tsy fahatanterahan’ny olombelona. Tamin’ny alalan’ny nahaterahan’i Jesosy, Andriamanitra Tsitoha dia naneho ny tenany tao Betlehema tamin’ny fahalemen’ny zaza vao teraka. Nandao ny lazany i Jesosy ary niaina tao anatin’ny toe-javatra tsy misy dikany: “Na dia Andriamanitra aza Izy, dia tsy nanamafy ny zony araka an’Andriamanitra. Nafoiny ny zavatra rehetra; nitana ny toeran’ny mpanompo manetry tena izy ka teraka ary fantatra fa lehilahy» (Filipiana 2,6-7NLB).
Vonona mandrakariva Jesosy hanaisotra ny lazany sy ny voninahiny hamonjy antsika. Tsy resaka fahefana sy laza akory ny laza. Ny tena fahalehibiazana dia tsy amin'ny tanjaka na ny vola. "Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika: na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo amin'ny fahantrany."2. Korintiana 8,9). Ny fahalehibeazan’Andriamanitra dia aseho amin’ny fitiavany tsy misy fepetra sy amin’ny fahavononany hanompo, araka ny asehon’ny zava-nitranga tamin’ny nahaterahan’i Jesosy.
Eritrereto ny toe-javatra nanodidina ny nahaterahan’i Jesosy. Tsy tamin’ny fotoana naha firenena matanjaka ny Jiosy, fa rehefa nohamavoina sy nofehezin’ny Fanjakana Romanina. Tsy tonga tao amin’ilay tanàna lehibe indrindra izy, fa lehibe tany amin’ny faritr’i Galilia. Teraka tao anatin’ny toe-javatra mahamenatra i Jesosy. Mety ho mora ho an’ny Fanahy Masina ny namorona zaza ao amin’ny vehivavy manambady tahaka ny tamin’ny vehivavy tsy manambady. Na dia talohan’ny nahaterahan’i Jesosy aza, dia tao anatin’ny toe-javatra sarotra i Jesosy. Milaza amintsika i Lioka fa tsy maintsy nandeha tany Betlehema i Josefa mba ho voaisa ao amin’ny fanisam-bahoaka: “Ary Josefa koa dia niala tany Galilia, tao an-tanàna Nazareta, hankany amin’ny tany Jodia hankany an-tanànan’i Davida, izay atao hoe Betlehema, satria avy amin’ny mpianakavin’i Davida sy ny taranak’i Davida izy, mba hankasitrahana an’i Maria, vadiny nitokiana; bevohoka izy »(Lukas 2,4-5).
Toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana, fa tsy tian’izao tontolo izao Izy. « Tonga tany amin’ ny taniny izy; ary ny Azy tsy nandray Azy » (Jaona 1,10). Ny vahoakany dia tsy nahalala an’Andriamanitra afa-tsy amin’ny maha-Andriamanitra manana fahefana sy voninahitra tsy hita maso. Tsy niraharaha an’ilay Andriamanitra nandeha tao amin’ny saha Edena niantso ny zanany mafy hatoka izy ireo. Tsy natoky ny feon’Andriamanitra izy ireo, izay niteny tamin’izy ireo moramora, nefa mafy. Tsy te hanaiky an’Andriamanitra araka ny nanehoany ny tenany tamin’izy ireo izao tontolo izao. Tena tia antsika anefa Andriamanitra, na dia mpanota ratsy fanahy aza isika: “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota” (Romana). 5,8). Ny nahaterahan’i Jesosy sy ny fanetren-tenany lehibe dia tokony hampahatsiahy antsika izany.
Ny anjely dia naneho rivotry ny voninahitra sy ny voninahitra ary ny laza teo amin'ny sehatry ny nahaterahana. Indreto ny hazavana mamirapiratra, ny antoko mpihira avy any an-danitra nihira fiderana an’Andriamanitra: “Ary niaraka tamin’izay dia nisy anjely maro be avy any an-danitra, izay nidera an’Andriamanitra ka nanao hoe: Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra ary fiadanana etỳ ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany. " ( Lukas 2,13-14).
Naniraka ny anjeliny ho mpiandry ondry Andriamanitra, fa tsy mpisorona na mpanjaka. Nahoana ny anjely no nitondra ny vaovao momba ny fahaterahan’i Jesosy tamin’ireo mpiandry ny olona rehetra? Te hampahatsiahy antsika ny fiandohan’ny vahoaka nofidiny izy rehefa nanoratra tantara indray izy. Abrahama, Isaka ary Jakoba dia samy mpiandry ondry, mpifindrafindra monina ary olona nipetra-potsiny izay nipetraka tany ivelany sy nirenireny niaraka tamin’ny ondriny maro be. Araka ny lovantsofina jiosy, ny mpiandry ondry tany amin’ny sahan’i Betlehema dia nanana asa manokana niandry ny ondry sy ny zanak’ondry izay nampiasaina tao amin’ny tempoly hanaovana sorona.
Nandeha haingana nankany Betlehema ireo mpiandry ondry ka nahita ilay zaza tsy misy kilema izay nolazain’i Jaona hoe: “Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra izay mitondra ny fahotan’izao tontolo izao!” (Johanes 1,29).
Noheverina ho olona tsy sivilizasiona izay tsy azo itokisana ny mpiandry ondry. Lehilahy maimbo zezika, tany, biby ary hatsembohana. Ny olona eo amin'ny sisin'ny fiaraha-monina. Ireo olona ireo indrindra no nofidin’ny anjelin’Andriamanitra.
Mandosira any Ejipta
Nampitandrina an’i Josefa tamin’ny nofy ilay anjely mba handositra ho any Ejipta sy hijanona elaela any. “Dia nifoha Josefa ka nitondra ny Zazakely sy ny reniny niaraka taminy nony alina ka nandositra nankany Egypta” (Mat 2,5-6).
Nentina tany Ejipta ilay Zaza Kristy ary lasa mpitsoa-ponenana tany amin’ny tany navelan’ny Israelita, dia ny tany fanandevozana sy voaroaka. Izany no nanjo an’i Jesosy nahantra sy nenjehina ary nolavin’ny olona tonga hamonjy azy. Izay te ho lehibe, hoy Jesosy, dia tokony ho tonga mpanompo. Izany no tena fahalehibiazana satria izany no maha-zava-dehibe an’Andriamanitra.
Ny nahaterahan’i Jesosy dia mampiseho amintsika ny atao hoe fitiavana sy ny maha-izy an’Andriamanitra. Navelan’Andriamanitra hankahala sy hikapoka an’i Jesosy isika olombelona, ​​satria fantany fa ny fomba tsara indrindra hahatongavana amin’izany dia ny mijery izay entin’ny fitiavan-tena. Fantany fa tsy amin’ny alalan’ny hery no fomba tsara indrindra handresena ny ratsy, fa amin’ny alalan’ny fitiavana sy hatsaram-panahy tsy tapaka. Tsy maratra ny sainy noho ny daroka ataontsika. Raha lavintsika izy, dia tsy ho ketraka izy. Tsy mamaly faty izy rehefa manisy ratsy azy isika. Mety ho zazakely tsy afa-manoatra izy, afaka maka ny toeran’ny jiolahy nohomboana amin’ny hazo fijaliana, mety hilentika ambany dia ambany noho ny fitiavany antsika.
Ny haren’i Jesoa Kristy
Rehefa nanolotra ny ainy ho antsika i Kristy, dia tsy ny fahafatesany ihany, fa nanolotra ny tenany ho antsika Izy mba hanan-karena ny mahantra. «Ny Fanahy no manambara amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Fa raha zanaka isika, dia mpandova koa, dia mpandova an’Andriamanitra sy mpiara-mandova amin’i Kristy, satria miara-miaritra aminy isika mba hiara-mitsangana aminy koa ho amin’ny voninahitra” (Romana . 8,16-17).
Tsy vitan’ny hoe nikarakara ny fahantrantsika i Jesosy fa nanome antsika ny hareny koa. Nataon’i Kristy ho mpiray lova amin’ny fahafatesany isika mba handovantsika tsy hita maso izay rehetra ananany. Izay rehetra ananany dia nolovainy amintsika. Fantatsika ve izany sehatra izany?
Misy hafatra lehibe ho antsika ny nahaterahan’i Jesosy, dia ny tokony hifampitondrantsika sy hitondrantsika tena. Tian’Andriamanitra ho tahaka an’i Jesosy isika. Tsy amin’ny endrika ivelany, tsy amin’ny fahefana, fa amin’ny fitiavana sy ny fanetren-tena ary ny fifandraisana. Jesosy nilaza fa ny mpanompo tsy lehibe noho ny Tompo. Raha Izy, Tompo sy Mpampianatra antsika, no nanompo antsika, dia tokony hifanompo koa isika. “Tsy tokony ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo, dia aoka ho mpanomponareo izy.” ( Matio 20,26:28 ).
Ry mpamaky malala, ampiasao ny fotoananao sy ny fanananao mba hanampiana sy hanompoana ny hafa. Araho ny ohatr’i Jesosy ary avelao Jesosy hiaina ao anatinao ary asehoy ny fitiavany sy ny famindrampony amin’ny mpiara-belona aminao mba hahalalany Azy.